Ukukhetha iZirconia-Iindaba-VSmile Co., ltd
Ixesha: 2021-05-24 I ngxelo:42
I-Zirconia yaziswa kwintengiso kwii-2000s. Kwakuyi-ceramic eyomeleleyo eyayibekwe kwimarike ngelo xesha kwaye yaziswa njengesixhobo sesakhelo kuphela. Izinto zesakhelo zazingabonakali kakuhle, zazifumaneka kwiidiski ezimhlophe kuphela, kwaye ukudipha kwakuyimfuneko ukuze kungcoliswe ibala.
Namhlanje, kukho iicwecwe ezimhlophe zeklasikhi, iidiski ezenziwe kwangaphambili, iidiski ezininzi, kunye namandla ahlukeneyo kunye nokuguquguquka. Iidiski ezimhlophe zilungele ukuba neelebhu ezincinci ukuya kweziphakathi kuba zinokufumana uluhlu olusezantsi kwaye zinolawulo lokuzenzela i-esthetics. I-zirconia eyenziwe kwangaphambili ifanelekile kwiilebhu ezinobunzima ekufezekiseni umthunzi owufunayo emva kokuntywila, umzabalazo wokuhlengahlengisa iiyunithi ngomthunzi, okanye unemicimbi engaguquguqukiyo yabasebenzi okanye iishifti ezininzi. Uya kuba ne-inventory enkulu xa usebenza ne-zirconia zangaphambili. Izinto eziphathekayo ziyi-monochromatic kwaye zihambelana ngakumbi kwaye ziqikelelwa, kwaye iibhetshi zakho ziya kuba zincinci xa kugaya oku kuthetha ukuba unesisila esinye kuphela, ukongeza esinye kunokuba luncedo kuwe. Iidiski ezinemigangatho emininzi zifana ne-pre-shaded kodwa zinama-esthetics aphezulu.
Iidiski zeZirconia zinokuhlelwa ngokwendlela ezenziwa ngayo, ikakhulu ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo; axial icinezelwe okanye isostatic icinezelwe. Iidiski ezixinzelelweyo ze-Axial zenziwe kukufa. Umgubo ocoliweyo ulayishwa ekufeni kwaye umgubo ucinezelwe ubuncinci kwi-30K PSI. Emva koko sintwa nge-900 ukuya kwi-1000C ngomjikelo wosuku lwe-3.5. Ezinye i-zirconia zitshisa sintered zikhokelela kwidiski enzima kwaye ezinye zipholile sintered zikhokelela kwiidiski ezithambileyo ezinokuba sengozini yokutsalwa. Emva kokuba ii-discs zenziwe zangasese, ziyasilwa kwimilo yazo yokugqibela kwaye igxalaba longezwa. Ukucinezelwa kwe-isostatic ebandayo okanye i-CIP kuthetha ukuba umgubo uhamba ngendlela ecinezelweyo ye-axial kwaye emva koko kubekwe iidiski ezininzi kwisitya esiguqukayo. Le nqanawa ibekwe emanzini kwaye amanzi abekwa phantsi komthwalo. Akwazi zilayishwe ngokulinganayo degrees 360 kuzo zonke iindlela. emva koko, zenziwe zangumxube ngokufanayo kwiidiski ezixinzelelweyo ze-axial. Ukuqinisekisa ukuba iyunifom ehambelana kunye nokuxinana okufanayo kuyo yonke, iidisiks zethu zirconia aYenziwe phantsi icinezelwe isostatic.
I-Cos zininzi iintlobo ezahlukeneyo ze-zirconia kwimarike, inokudideka xa ukhetha nganye kwiintlobo ezahlukeneyo zokubuyiselwa kwelebhu yakho. sicebisa ukwahlula i-zirconia kwiindidi eziphambili ze-3 ngokusekwe kumandla kunye nokuguquguquka. Eyokuqala yi-High Translucency (HT) eyomeleleyo amandla e-1350 MPa Okwesibini yi-Super Translucent (ST) enamandla e-1200 MPa. Okokugqibela, udidi lokuqala yi-Super Translucent (UT) apho amandla e-flexural yi-700 MPa.
Uhlobo ngalunye lwe-zirconia lunendawo ekhethekileyo kwilebhu yakho! Ishati engezantsi inokukunceda uthathe isigqibo sokuba ulusebenzise nini uhlobo ngalunye lwe-zirconia loluphi uhlobo lokubuyiselwa olwenzileyo. Ikholamu yasekhohlo zizinto ekufuneka uziqwalasele xa usenza isigqibo sokuba yeyiphi i-zirconia efanelekileyo kwimeko ethile kubandakanya ukuguquguquka, ukubanakho kwesixhobo sokugubungela isiphunzi esimnyama, ukuba usebenza kwisicelo sebhulorho okanye hayi, amandla okwenza izinto eyahluliweyo okanye encinci egaleliweyo, okanye ukuba ufuna ukusebenza ngesixhobo esipheleleyo semonolithic okanye hayi.
uhlobo HT ST UT
Ukutshintsha kwezinto 37% 41% 49%
Amandla okumboza isiphunzi esimnyama Kulungile Kulungile Poor
Izicelo zebhulorho Ibhulorho ende Ibhulorho enkulu Ukuya kwiiyunithi ezi-3
Amandla okubekwa Hayi Ewe Ewe
Umtya opheleleyo wemathiriyeli ye-monolithic Ewe Ewe Ewe
Iinkcazo Iiframworks, ukukopa, i-Hybird isiko lesikizi, izithsaba ezigcinwe kwiscrew Ibhulorho enkulu, Zonke iiyunithi ezingasemva ezingatshatanga, zonke izikhombisi xa kubeka Zonke iiyunithi ezingatshatanga, eyona materilas angaphambili, ibhulorho encinci
Esi sisikhokelo nje esikhuthaziweyo. Yonke ibhulorho kufuneka ibe nesixa esaneleyo sokudibanisa kwaye ii-cantilevers ziya kuqwalaselwa kuphela xa kusetyenziswa i-HT okanye i-ST ngaphandle kwento encinci enokubakho ecaleni.
Xa usenza isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwe-zirconia ofuna ukulusebenzisa kwilebhu yakho, kuya kufuneka usoloko ukhetha enye ekulula ukuyisebenzisa, enganyangekiyo kwi-chip, enenkqubo engaguquguqukiyo yokuvelisa, kwaye inexabiso elisebenzayo kodwa ayithethi ukuba ibiza ixabiso eliphantsi kuba kufuneka inike elona xabiso likhulu umthengi wakho, kwaye okokugqibela, unokufumana inkxaso yemveliso nanini na uyifuna.
I-PREV: 3, 4, 5 AXIS Machine Mental Milling
OKULANDELAYO : I-White Zirconia, i-Pre-Shaded Discs Milling Discs, leliphi ilungelo kuwe?
I-Vsmile HappyZir 3D Plus Pro yee-Multilayer iZirconia Ibhlok iyahambelana neNkqubo evulekileyo